Wakaaladda Wararka SONNA oo u dabbaaldageysa Xuska 56-aad (Warbixin) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wakaaladda Wararka SONNA oo u dabbaaldageysa Xuska 56-aad (Warbixin)
By kullane / January 5, 2020 January 8, 2020
Marka laga yimado aasaaska Wakaaladda Wararka SONNA oo fikrad ahaan xambaarsanaa rabitaanka bulshada, ka hor waxaa jiray 2- Idaacadood oo kala ahaa:- Raadiyo Hargeysa oo la furay 1943-dii, xilligii Gumeysiga Ingiriiska iyo Raadiyo Muqdisho oo la furay 1951-kii xilligii,daakhiliyadda maamulka Talyaaniga ee Gobolada Koofureed,kuwaas oo wax ku gudbin jiray dhowr luqadood oo ay fahmi kareen tiro aad u yar oo Soomaali ah.
Wakaaladda Wararka Qaranka Somaaliyeed ee SONNA waxaa la aasaasay sanadkii 1964-tii waana mid ka mid ah Tiirararka ugu weyn ee wasaaradda Warfaafinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya .
Xarunta ugu weyn ee SONNA waa magaalada Muqdisho, waxayna laaamo ama xafiisyo ku laheyd dalka gudihiisa iyo dibadiisaba sida hay'adaha Midowga Carabta, Afrika iyo kuwa caalamiga ah.
Waa Wakaaladda Wararka rasmiga ah waxay bixisaa adeeg news ah taas oo macnaheedu yahay ururinta wararka gudaha iyo dibadda iyo caymiska dhacdooyinka iyo xaqiiqooyinka iyo hadal iyo dhawaaqa iyo bixinta adeegyada news ay siiso warbaahinta kala duwan sida raadiyaha, telefishanka, wargeyska iyo Web ah.
Marka la eego saacadaha shaqada iyo content sida ay u shaqayso SONNA warbaahinta 24-ka saac ah oo xiriir ah.
Message: ama Fariin
SONNA ayaa ah isha wararka waxeyna ku shaqeysaaa daacadnimo, dhex-dhexaadnimada iyo daba-tag oo dhan dhacdooyinka xiisaha u leh ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee heerarka kala duwan gudaha iyo dibadda.
Wasaaradda Wrfafinta waxay wadaa qorshe ama Promotion ah hay'adda shaqada warbaahinta si ay u noqdaan awood dheeraad ah oo casri ah iyada oo loo marayo farsamooyinka iyo technology isticmaalaa.
Ujeedooyinka shaqada Hay'adda ee SONNA
in la gaarsiyo hawsha SONNA Gobol ksta iyo dibadda intaba iyadoo la abuurayo kaaadiriin hore iyo kuwa cusub ee loo abuurayo baahinta wrarka SONNA.
2 - Raadraac iyo la socodka wararka ay daabaceen wakaaladaha wararka iyo warbaahinta caalamiga ah Carabta iyo kuwa kale si ay u gaaraan hababka ansaxnimada iyo jawaabta ay qanci karo.
3 - shirarka iyo qaybinta news gudaha iyo dibadda ah, xaqiiqooyin, turjumo oo naadiya xilligan ay si toos ah u dhacaan.
4 - soosaarka qalabka saxaafadda iyo macluumaadka in la kordhiyo warbaahinta dawladda sida radio iyo wargeyska iyo telefishanka.
5 - diyaarintas news maxalliga ah iyo xaqiiqooyinka in hay'adaha news Carabi iyo Ingiriisi in ay iskaashi la xiriir hay'adda kale.
6 - In la siiyo qoraallo maalin ee Carabi iyo Ingiriisi in ergooyinka diblomaasiyadeed iyo danjirayaasha eek u sugan Jamhuuriyadda Somlia gudaheeda, iyo gaarsiinta Pulettin Carabi iyo idaacadaha Ingiriisi bulshooyinka carabta ah iyo kuwa shisheeye ee dalka.
7 –inay diiwaangeliso dhacdooyinka sida dhinacyada kala duwan ee la kaashanaya hay'adaha of news gobolka iyo caalamka iyo xoojinta xiriirka kale ee caalamka.
8 - tixgelinta qiyamka iyo dhaqanka oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dhinacyada news iyo faafinta.
9 – Workshop si ay u abuuraan kaadiriin ah u tababaran oo aqoon iyada news shakhsiyeed.
1o.waxay Wakaaladda SONNA qabtaa hawsha diyaarinta iyo soo gudbinta warsidaha maalinle ah ah Carabi kaas oo laga sii daayey iyo baahiyey Radio Muqdisho iyo TV-ga qaranka.
Haddaba Wasirka Warfaafinta XFS Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Agaasimaha Wakaaladda Wararka SONNA Cali C/qaadir Cali ayaa hambalyo ku aadan xuska 56-aad ee aasaaska wakaaladda aawadeed u diray maamulka iyo shaqaalaha SONNA,wxayna u rajeeyeen in sanadkaan kisa kaler ay ku gaarfaan horumar iyo barwaaqo.
Wakaaladda Wararka SONNA
Soo dhaweyntii madaxweynaha Galmudug ee Turkiga+Sawirro
Kiiska Muwaadin Soomaaliyeed oo Dowladda Denmark sharcigii kala noqotay oo maxkamad horyaala
Danjiraha JFS ee Suudaan oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Itoobiya ay u soo magacaawday dalkaasi
Sii hayaha Wasiirka Maaliyadda XFS oo kulan fogaan arraga ah la qaatay Madaxda IMF iyo World Bank
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee Aqalka Sare oo gaaray Baardheere
Ciidanka Kumaandooska Danab oo Bur-buriyey Saldhig Argagixisada ay ku lahaayeen Jubbooyinka “Sawirro”
Golaha Wasiirrada Oo Ansixiyay Habraacyada Xoogga Dalka, Hindise Sharciyeedka Maalgashiga Iyo Siyaasadda Ilaalinta Bulshada “SAWIRRO”